Miiska miiska sheyga lafuhu miyuu fudud yahay in la qabto?
Ingiriisku wuxuu ikhtiraacay weelka miiska shiinaha lafaha siddeed qarni. Kadib dhowr horumar oo adduunka ah, waxay noqotay mid ka mid ah noocyada ugu caansan ugxaanta adduunka. Mashiinka miisaanka lafaha ee Shiinaha ayaa shaki la'aan aad ugu habboon in lagu qurxiyo miiska arooska, sababtoo ah lafuhu waa kuwo adag oo jilicsan, oo la mid ah ...
Kee baa fiican, tanleyda cad ama tan lafta cusub, aan soo bandhigo?
Weelasha miisaska loo yaqaan 'Porcelain table' waa miisaska ugu caansan ee miisaska miiska maalin kasta. Marka la eego alaabta ceeriin, weelka loo yaqaan 'porcelain table' wuxuu u qaybsan yahay weel cad oo jiingado ah, weelka lafaha lafaha, iyo miisaska miraha lagu sameeyo. Kuwaas waxaa ka mid ah, miiska miisaska lafaha shiinaha ayaa aad caan u ah. Lafta shiinaha waxay ahayd orig ...
1. Dayactirka dhoobada 1. Dharka guriga lagu nadiifiyo ayaa loo isticmaali karaa nadiifinta maalinlaha ah. 2. Ku dar wax yar oo ammonia ah saabuun ama isticmaal isku darka qadar isku mid ah linseed iyo turpentine marka hore, kaas oo yeelan doona sun nadiif ah oo ka dhigi kara dusha sare dhalaalaya. 3. Hadaad daadato dareere dheeh badan ...